Gazety Sysomos: Fanaraha-maso sary sy horonan-tsary ho an'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Gazety Sysomos: Fanaraha-maso sary sy horonan-tsary ho an'ny media sosialy
Alarobia, Septambra 16, 2015 Alarobia, Oktobra 19, 2016 Douglas Karr
Marika nasionaly ianao ary mizara sary mahamenatra ny marikao amin'ny haino aman-jery sosialy ny mpanjifa enjehina. Tsy asian'izy ireo sary ianao, fa tsara loatra raha tsy zaraina. Malaza be izany ary alohan'ny hahalalanao azy dia handeha ny fanairana fanaraha-maso anao satria manomboka manonona anao ny tranonkala mitarika anao ary mizara ny sary an-tserasera.
Momentum dia efa naka toerana ary ny fotoana no fototr'izany, saingy tara loatra ianao. Amin'ny fomba fiarovana ianao. Manao fanambarana ianao, miala tsiny amin'ny fanetren-tena ary manao izay fara herinao mba hahavitana izany amin'ny mpanjifa.
Ahoana raha misy fomba hafa? Ahoana raha misy serivisy izay mamantatra ny sary famantaranao amin'ny sary ary nampandre anao ny tena zava-nitranga. Ao anatin'ny tambajotra kely izay nahita ny sary dia latsa-bato vitsivitsy no ahitan'izy ireo ny valinteninao. Angamba ianao manery ny sary hiverina amin'ny fialantsiny sy famerenam-bola. Na dia tsy manakana ny sary tsy handeha viral aza izany, ny olona rehetra manapa-kevitra ny hanoratra momba ny debacle dia mizara ny valinteninao ihany koa.
Raha tokony ho toy ny marika mahatsiravina tsy miraharaha ianao dia toa marika mihaino ny mpanjifanao izao. Ity no tombony azo aorina Gazety Sysomos (teo aloha Gazemetrika) - manome fanaraha-maso sary sy horonan-tsary ho an'ny media sosialy, Analytics, fitantanana fampielezan-kevitra sy fanaovana tatitra.
Ny fitantanana marika mahasalama dia mitaky tsy ny fahafantarana fotsiny hoe iza no miresaka momba ny marikao, ny vokatrao na ny serivisinao - fa koa ny sary hitan'izy ireo sy hitany. Sysomos Gaze dia mahita ny sarin'ny marikao amin'ny fantsona sosialy ary mampiaraka azy ireo amin'ny toerana iray.
Gazety Sysomos dia ilaina ihany koa amin'ny fitantanana ny zon'ny nomerika, ahafahan'ny marika mifandraika mora amin'ireo mpampiasa nandefa sary. Afaka mangataka fahazoan-dàlana hamoaka indray ny sary novokarin'ny mpampiasa tamin'ny fantson'izy ireo manokana ny marika, hamadika izany atiny ho fananana miasa ho an'ny marika.
Azonao atao ihany koa ny manara-maso ireo sary sy horonantsary miresaka momba ny fotoana amin'ny Sysomos Gaze Analytics.
Momba an'i Sysomos
Sysomos dia orinasam-pitsikilovana sosialy ampiasain'ny siansa angon-drakitra izay manome ny sehatr'asa eo noho eo ny resaka an-jatony tapitrisa izay mitranga an-tserasera isan'andro. Ny sehatra fitsikilovana sosialy Sysomos dia mamoaka hatrany ireo resaka sy tantara vaovao ireo mba hanomezana valiny amin'ny mpivarotra valiny amin'ny fotoana tena izy ny amin'izay eritreretin'ny mpanjifany sy tsapany.
Mitadiava sy mifehy sary sy horonantsary sosialy an'ny mpanjifa viral tena izy avy amin'ny mpanjifa amin'ny fomba fijery tokana.
Ataovy mandeha ny alàlan'ny fangatahana fangatahana fankatoavana ahafahan'ny mpivarotra manangona fahazoan-dàlana mora avy amin'ny mpanjifa hampiasa ny sarin'izy ireo sy ny horonantsarin'izy ireo amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing
Mpanamboatra atiny mitovy amin'ny Smartlists: Ireo mpivarotra dia afaka manangana fanangonana sary miorina amin'ny singa hita maso amin'ny alàlan'ny fisafidianana andiana sary miaraka amin'ireo singa tadiavin'ny mpivarotra hanara-maso na hikarakara.
Araho maso ary ataovy miaraka amin'ny Instagram sy Twitter influencers, mahazo ny fahitany ny toetra mampiavaka azy ireo, ny toerana misy azy ary ny hetsika ataon'izy ireo
Maherin'ny 1500 ny marika sy ny masoivoho, ao anatin'izany ny 80 isan-jaton'ny marika manandanja indrindra, araka ny laharana nomen'i Interbrand, dia matoky an'i Sysomos amin'ny faharanitan-tsainy. Sysomos dia manana birao amin'ny tanàna fito eran'izao tontolo izao, toa an'i London, New York, San Francisco ary Toronto.
Tags: famantarana ny marikafanaraha-maso ny marikagazemetricsfampandrenesana saryfanaraha-maso ny saryfamantarana famantaranafanaraha-maso ny media sosialysysomossysomos mijeryfanairana amin'ny horonan-tsarylahatsary fanaraha-maso